Isipiliyoni se-Ningbo "5G + Smart Port" sinethonya kuwo wonke umhlaba-Izindaba-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Isipiliyoni se-Ningbo "5G + Smart Port" sinomthelela emhlabeni wonke
ISIKHATHI: 2020-09-01 HITS: 24
I-Smart gantry crane enokubambezeleka okungama-7 millisecond, amaloli we-5G angenamuntu, uhlelo lokulinganisa olukhomba ngokuzenzakalela amakhabethe alimele ... into "yobuchwepheshe obumnyama" ikhuthaza ukuqhubekisela phambili okuqhubekayo kokwakhiwa kwe- "5G + smart port" kweNingbo Port, futhi inethonya embonini elithuthuka njalo. UNingbo Joiwo zikhethekile ngocingo lwezimboni njenge ucingo oluvikela isimo sezulu, ucingo oluphuthumayo, i-intercom njalonjalo. Njalo ngonyaka, sizothekelisa iziqukathi eziningi nge-Ningbo Port kumakhasimende ethu' amazwe.Sibonile ukuthuthukiswa okuqhubekayo kweNingbo Port, futhi ukuthuthukiswa kobuchwepheshe kwenza ukuthunyelwa kwethu kube lula kakhulu.
Izolo, iChina Mobile Communications Group Co, Ltd. ibambe ingqungquthela ye-5G Smart Port and Shipping Ecological Cooperation e-Ningbo ukukhuthaza ulwazi nentuthuko ehlakaniphile yeNingbo Zhoushan Port kumayunithi echweba ezifundazweni ezingaphezu kwezingu-20, omasipala kanye nezifunda ezizimele, kufaka phakathi IShanghai, iGuangdong, neTianjin.
"I-Smart port" ingenye yezindawo ezibalulekile ze-5G ukunika amandla izinkulungwane zezimboni. Njengetheku elikhulu kunawo wonke emhlabeni mayelana nokuhamba kwempahla iminyaka eyi-11 ilandelana kanye nokuhamba kwesitsha esikhulu kunazo zonke emhlabeni, iNingbo Zhoushan Port ibambisene neChina Mobile kusenesikhathi ukuqala ukwakhiwa kwe- "5G + Smart Port".
Ngo-Mashi 2018, i-Ningbo Port yaqedela isiteshi sokuqala se-5G port. NgoMeyi walo nyaka, yasayina "Isivumelwano se-5G + Smart Port Strategic Cooperation Agreement" neChina Mobile, iHuawei, neZhenhua Heavy Industry ukudala i-5G berthing asizayo, i-5G izimo ezinhlanu zohlelo lokusebenza oluhlakaniphile yi-smart tally, iloli le-5G ukushayela okungenamuntu, isondo le-5G -thayipha i-gantry crane elawulwa kude, nendawo ye-5G yendawo ethekwini engu-360-degree edidiyelwe.
Isethi yedatha isekela imiphumela ehleliwe yokwakhiwa. Njengamanje, i-5G yohlobo lwethaya gantry crane elawulwa kude izuze ukusetshenziswa okukhulu, amasethi emishini ama-6 afakiwe ekukhiqizeni, isikali siqala kuqala ezweni, izindleko zabasebenzi zincishiswe ngaphezulu kuka-50%, nemishini Izindleko zenguquko zilondolozwe ngaphezu kwe-20%. Isiteshi sesithenjwa se-5G + Beidou naso siphothulwe ngempumelelo, esingathuthukisa amaloli ajwayelekile abe ngamaloli angenazibopho ze-5G futhi sakhe inethiwekhi yokubambisana yokuphela kokuphela. Ngemuva kokukhuthazwa kwalobu buchwepheshe, ukusebenza kahle kwamaloli endaweni ethekwini kulindeleke ukuthi kukhuphuke ngaphezu kuka-40%, konga izindleko zabasebenzi ngaphezulu kuka-50%.
"UNingbo ngempela useqhulwini ekwakhiweni kwe-'5G + Smart Port '! Ijubane elisheshayo, imiphumela eminingi, nokwenzeka kokuphindaphindeka nokwenyuswa." Emhlanganweni, abantu abafanelekile abaphethe amachweba afana neTianjin Port, Taicang Port, Rizhao Port banikeze ukuncoma kwabo.
Umuntu ofanele ophethe i-China Mobile uphinde wathi eminyakeni edlule, uchungechunge lokuhlola nokwenziwa okusha okwenziwe yi-Ningbo Zhoushan Port akuhlalanga nje kuphela ngolwazi olubalulekile ekuthuthukisweni kwamachweba ahlakaniphile emhlabeni, kepha futhi kunikeze umhlahlandlela wezinye izimboni eziqondile indlela "yokwakha nokusebenzisa i-5G kahle".
Ungasithuthukisa kanjani isipiliyoni sokwakhiwa kwe- "5G + smart port" seNingbo Zhoushan Port ezweni lonke? I-China Mobile ikhiphe imbobo ehlakaniphile ye-5G futhi yathumela ngokubambisana kwemvelo "Uhlelo Lwezinkulungwane Zoseyili" kanye neplatifomu yezimboni ezihlakaniphile yase-China Mobile e-Ningbo. Ihlela ukwakha ipulatifomu yokuqala ye-5G embonini yetheku neyezokuthutha, futhi ibambisane namachweba amakhulu ezweni lonke ukufeza ukuthuthukiswa kwenethiwekhi, ukukhuphuka kwamapulatifomu, ukuthuthukiswa kwezicelo, kanye namamodeli Ukuthuthuka nokuthuthuka kwemvelo, kwakhiwe ukuzulazula kwemboni ye-5G ehamba phambili emhlabeni amabhentshi, phinda amachweba ayi-10 wekhwalithi ephezulu ye-5G, bese umboza amakhilomitha ayi-100 5 wemizila yamanzi ehlakaniphile ye-1,000G emanzini asemqoka.
"Amachweba ahlakaniphile" ayisisekelo esibalulekile sokuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu yamachweba. Ngemuva kokuqubuka kwesifo esisha se-pneumonia esiwumqhele, amachweba asogwini lwezwe lami namachweba emifula angaphakathi nezwe asheshise ukwakhiwa kwamachweba ahlakaniphile. Njengesizukulwane esisha sengqalasizinda yolwazi, i-5G izothuthukisa ngempumelelo ubukhulu bokwakhiwa kwamachweba ahlakaniphile futhi inike amandla amachweba ahlakaniphile Incazelo icebile. ” kusho uDing Li, unobhala jikelele weChina Ports Association.
Ukuze ufunde kabanzi ngathi, sicela uvakashele: https://www.joiwo.com
Yini i-Electronics Circuit board-proofing ezintathu-lacquer yocingo olusindayo？